'मोबाईलदेखी मोबाईलसम्म विश्वभर सित्तैमा फोन गरौ' | मेरो कलम
– आफन्तहरु विदेशमा छन् । दैनिक लामो समयसम्म फोन भईरहन्छ । सन्चो विसन्चो के छ वुझ्नको लागी पनी दैनिक फोन गर्नु पर्ने वाध्यता छ । उता दैनिक ठुलो धनराशी फोनमै खर्चभईरहेको व्यथा पनी अनुभुती गरिरहनुभएको छ भने तपाईको लागी भाईवर एप्सको प्रयोग प्रभावकारी हुनसक्छ । भाईवर फोन गर्दा तथा म्यासेज पठाउदा पैसा नलाग्ने एप्स हो । लामो समयसम्म फोनमा कुरा गरिरहनुपर्ने व्यक्तिहरुको लागी यो एप्स प्रयोग गर्नु भनेको आपँ पनी झार्नु र लौरोपनी नअड्किनु जत्तिकै हो । निशुल्क फोनको लागी निकै प्रभावकारी यो एप्स दुईचार हजार मानिसले मात्र प्रयोग गरेका छैनन् करौडौ मोबाईलमा डाउनलोड भईसकेको छ ।
‘किन भाईवर एप्स प्रयोग गर्ने’ भन्ने प्रश्नमा भाईवरको आधिकारीक बेवसाईटमा भनिएको छ निशुल्क फोन तथा म्यासेज पठाउन यो एप्स प्रभावकारी हुनेछ । त्यस्तै एक पटक एप्स सेटिङ गरिसकेपछि प्रत्येक पटक साईन अप गर्नुपर्ने जस्ता झन्झट आईपर्ने छैन । अनलाईनमा आउना साथ स्वतं भाईवर प्रयोगकर्ताको लिष्ट पाउन सकिनेछ । त्यस्तै मोवाईल कलको लागी थ्रिजी तथा वाईफाईको माध्यमवाट उत्कृष्ठ क्वालिटीमा फोन गर्न सकिन्छ । निः शुल्क फोन तथा म्यासेज गर्न मिल्ने महत्वपुर्ण भाईवर एप्सको वारेमा जानकारी थाहा पाउनु भएको थिएन भने अव चै तपाई पनी यो एप्स प्रयोगको लागी उत्साहित हुनुहुन्छ होला हैन ? तपाई मात्रै हैन, भाईवर एप्स प्रयोग गर्दै आईरहेका प्रयोगकर्ताहरु पनी निकै खुसी र उत्साहित रहेको पाईएको छ । गुगल प्लेमा भाईवर एप्स कस्तो लागिराछ भनेर राखिएको जनमतमा लाखौ मानिसले धेरै राम्रो एप्स भनेर रेटिङ गरेका छन् ।
यो एप्स प्रयोगको लागी कस्तो मोवाईल आवश्यक छ ?
साधारण भन्दा साधारण मोबाईलमा भने यो एप्स इन्सटल गर्न सकिदैन । स्मार्ट टेक्नोलाजीमा आधारित मोवाईलमा मात्रै डाउनलोड गर्न सकिन्छ । एन्ड्रोईड, विण्डोज ,आईफोन, नोकिया, ब्ल्याकवेरी लगायतका अपरेटिङ सिस्टम भएको स्मार्ट फोनमा दुवै तर्फ यो एप्स ईन्स्टल गरेर निशुल्क कुराकानी तथा टेक्स्ट म्यासेज सेयर गर्न सकिन्छ । त्यस्तो अर्को महत्वपुर्ण विषय यो एप्समा कुरा गर्ने समयमा भने ईन्टरनेट कनेक्सन आवश्यक छ ।
कसरी भाईवर एप्स सुचारु गर्ने ?
भाईवर एप्स ईन्सटल गर्नको लागी भाईवर डटकम लग ईन गर्नुस अथवा गुगल प्लेमा भाईवर एप्स नामवाट खोजी गर्नुभयो भने सजिलै भेट्न सक्नुहुन्छ । एप्स ईन्सटल गरिसकेपछि तपाईले एकाउण्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ । एकाउण्टमा तपाईले फोन नम्वर राख्न आवश्यक छ । त्यस्तै लोकेशन पनी जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ । तपाईले फोन नम्वर अपलोड गर्नासाथ सेवा सुचारु गर्नको लागी तत्काल म्यासेज पाउनुहुनेछ । सो म्यासेजवाट तपाईले सेवाको लागी अघि वढ्न सक्नुहुन्छ । एक पटक भाईवर एप्स एक्टिभेट भईसकेपछि दोहोराएर एक्टिभेट गरिरहन भने पदैन । जव तपाई ईन्टरनेट कनेक्सनमा जानुहुन्छ त्यसपछि नै अरु भाईवर प्रयोगकर्ताको लिष्ट देख्न सक्नुहुन्छ । र तपाईले आफ्ना आफन्त तथा साथीभाईसगँ दैनिक उत्कृष्ठ क्वालिटीमा फोनमा कुराकानी एवं म्यासेज पठाएर निशुल्क फोनको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ ।
हालै भाईवरले नयाँ सुविधा थप गरेका छ । मोबाईलवाट मात्रै नभई अव डेक्सटपवाटै फोन गर्न सकिन्छ ।
आनन्द पोखरेल May 15, 2013 Log in to Reply
डेस्कटपमा यो भाइबर कनेक्ट हुदैन । मोवाइल रिजिष्ट्रेशन गर पहिला भन्छ । आफ्नो मोवाइल त नोकिया को ७२१० हो सपोर्ट गर्दैन अब के गर्ने ?
Shanti Bikram Gautam May 15, 2013 Log in to Reply
तपाईको मोवाईल साधारण हो । स्मार्ट मोवाईलमा मात्रै भाईवर ईन्सटल गर्न सकिन्छ । हो,मोवाईलमा भाईवर एप्स रजिष्टर गरिसकेपछि मात्रै डेक्सटपवाट कल गर्ने सुविधा रहेको छ । 🙂
SANJIB NIRAULA May 28, 2013 Log in to Reply
डेस्कटप मा यो viber प्रयोग गर्न को लागि bluestack भन्ने ठेगाना बाट mobile अप्प्लिचशन downlaod गरेर त्यो application भित्र viber ओपेन गर्नुस अनि mobile number रेगीस्टर गरेर मज्जाले फोन गर्नुस
आर.आर. श्रेष्ठ ‘‘ओखरगाउँले’’ June 8, 2013 Log in to Reply
viber.com ma gayera sign up garda hudaina?